I-Casa Belle Vue-3 BHK Mountain Home, i-Almora Dist.
Ukujabula okuhlala ekhaya eliwubukhazikhazi elisezintabeni, okunokubukwa okumangalisayo kweqhwa elimbozwe iziqongo ze-Himalayan zaseTrisul, Nandadevi nasePanchchuli. Itholakala phezu kwegquma eliluhlaza endaweni encane ebizwa ngokuthi i-Shaharfatak, indawo yokuhlala enokuthula kanye nokubaleka okumangalisayo eduze kwase-Mukteshwar, nje
- Amahora angu-9 ukushayela ukusuka eDelhi
- Amahora angu-2 ukushayela ukusuka e-Nainital/Bhimtal.
- 1-2 amahora ukushayela eziteshini zamagquma ezifana Kausani, Binsar, & Almora.
Ukupaka Imoto + Pheka (okwengeziwe)
Sicela ufunde incazelo enemininingwane ngezansi:
Intaba enhle kanokusho i-Chalet enombono we-panoramic we-200 degree wehlathi elihle elimbozwe isigodi, neziqongo ezinkulu ze-Himalayan (ukubukwa okuhle kakhulu phakathi kukaSepthemba kuya kuFebhuwari).
* I-Chalet inamakamelo okulala / ama-suites amakhulu ama-3 amahle, ngalinye lihlotshiswe ngobuhle ukuze lilethe imibala yokuqhakaza kwentaba - Okumhlophe, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, noPinki.
* Igumbi ngalinye lokulala line-en-suite / yokugezela enamathiselwe
* Igumbi lokuhlala elikhulu, elinamakhona okuhlala anethezekile angu-2 okuhlala abantu abangu-6-8 lilinye (ikhona elilodwa linendawo yomlilo, elinye ikhona elifakwe i-TV enkulu engu-42" ye-LED ukuze ubuke umndeni.
* Indawo yokudlela enetafula lokudlela lezihlalo eziyisi-6
* Isitezi esikhulu se-balcony esibheke isigodi esihle
* Ikhishi elihlome ngokuphelele
* Utshani / izindawo ezingaphandle
- I-TV ye-LED engama-intshi angu-42 inikezwe eGumbini Lokuhlala ukuze ibukwe nomndeni
- Ikhishi elinezinto eziyisisekelo ezifana ne-microwave, i-OTG, i-air fryer, isiqandisi, isitofu segesi, i-RO, i-cookware ne-service ware kanye nesiteshi setiye (itiye, ikhofi, ushukela, ukhilimu).
- 25 L izifudumezi zamanzi zokuhlinzeka ngamanzi ashisayo kuzo zonke izindlu zangasese.
- Abalandeli besilingi / etafuleni kuwo wonke amagumbi ezinyanga zasehlobo (i-air-conditioning ayidingeki)**
- Ama-heaters / ama-convector okushisa kuwo wonke amagumbi ukuze asetshenziswe ebusika
- Isipele samandla singohlelo lwe-UPS, oluzonika amandla izibani nabalandeli, nokho izinto zikagesi ezinzima njengempahla yasekhishini, amagiza / izifudumezi zamanzi, izifudumezi zamagumbi, i-ayina kagesi, nezinto zokomisa izinwele azikwazi ukusetshenziswa ekubuyiseleni ugesi uma kwenzeka kuba nogesi. ukunqamuka
- Izingubo zokulala zikagesi kuwo wonke amagumbi
Singahlela umlilo ovulekile ngezindleko ezengeziwe zama-Rs. 1500 ukusetshenziswa ngakunye (cishe amahora angu-3)
Izinsiza ziyatholakala - mahhala
Amalahle akhokhiswa ama-Rs. 1500 ukusetshenziswa ngakunye/isivakashi singazilethela amalahle ngokwaso.
Qaphela: amalahle awatholakali eduze, ngakho-ke sincoma ukuthi aliphathe esuka e-Bhowali.
- Imoto iya ngqo endaweni futhi ibe nezindawo zokupaka izimoto ezi-2.
- Izinyathelo eziyi-15-20 zokungena eVilla usuka eParking.
- Ukugcinwa Kwezindlu Okuhambisanayo - kanye ngosuku (10 am - 4pm)
- Ilineni elisha elihlanzekile linikezwa njalo lapho umuntu engena. Izindleko zokushintsha Ilineni ezengeziwe zingu-INR 500 umbhede ngamunye.
- Ugesi - Amayunithi angama-40 ngosuku (abalwe nge-pro-rata). Ugesi owengeziwe uzokhokhiswa ngama-Rs. 10 iyunithi ngayinye.
Qaphela: Kwanele ukuqhuba indlu ngokufudumeza. Isivalo eso ukuvimbela ukusetshenziswa kabi / ukumoshakala kukagesi ngokushiya izifudumezi zamanzi / izifudumezi zegumbi zishiywe zinganakiwe.
*KUPHEKWA NGUMNAKEKELI/ UPHEKI*
- Umnakekeli wethu angapheka ukudla okuphekwe ekhaya ngemali encane kukho konke ukudla netiye:
Rs. 500 ngosuku (ezivakashini ezingu-1-4 kuhlanganise nezingane)
Rs. 800 ngosuku (ezivakashini ezingu-4+ kuhlanganise nezingane)
- Igrosa kufanele ihlinzekwe yizivakashi ngokukhetha ngakunye
- Sicela ungaceli umnakekeli wethu ukuthi ayokuthathela igilosa njengoba uzodinga ukuhamba ngezinyawo u-2-3 Kms ezintabeni okuthatha isikhathi esiningi namandla.
- Abanakekeli bethu banesitayela sokupheka sentaba (i-pahadi), futhi bangenza kokubili ukudla kwemifino nokungeyona imifino. Isitayela sabo sokupheka singaba nesinongo, ngakho-ke sicela ubachaze mayelana nokunambitheka kwakho okuqondile lapho ufika.
Izinketho zokudlela zokudlela azitholakali kule ndawo.
Izidlo zasemakhaya zingadliwa eShaharfatak Village.
- Izinketho zokudlela:
1. Ihotela le-boutique i-Te Aroha etholakala kumaminithi angu-30 ukusuka e-Dhanachuli (kunconyelwe ukudla kwasemini)
2. Ikhefi e-Mukteshwar (imizuzu engu-45 ukusuka).
- Amanzi ayashoda emagqumeni futhi siyeluleka ukusebenzisa amanzi ngobuhlakani.
- Ukunciphisa ukumoshwa kwamanzi, sibeka i-cap ekusetshenzisweni ukuze sigweme ukuchithwa futhi okufanayo kwanele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
- Amanzi ahambisanayo angu-1000 ngosuku (kubalwa i-Pro-rata), engeziwe azokhokhiswa ama-Rs. 500 ku-1000 litre njengoba kufanele sithenge amanzi njalo ezindaweni ezikude.
- Sinomshini wokuwasha endaweni.
- Sivumela izilwane zangasese eziqeqeshiwe kuphela.
- Imali yokuhlanza ngesikhathi esisodwa yama-Rs. 2500 iyasebenza.
- Sicela uqiniseke, izilwane ezifuywayo azisebenzisi usofa nemibhede.
- Sicela ugcine izilwane ezifuywayo ngaphakathi ngemva kuka-8pm ukuze ugweme izilwane zasendle.
Ukubuka ilanga liphuma phezu kweziqongo ezimbozwe yiqhwa, noma ubhiya wantambama uhlezi ngaphansi kwelanga elikhanyayo e-Sun Deck, kwenza i-Chalet yethu ibe yinto ejabulisayo.
Le ndawo iyidolobhana elihle, elingadayisi, elinezintaba, elinezindlu zokuhlala ezimbalwa, nezindawo zokungcebeleka. Uma unenhlanhla, ungase uzwe ingwe ibhodla, ngezinye izikhathi ebusuku, ehlathini elingezansi. Indawo iyizulu kubaculi, abathwebuli bezithombe, ababuka izinyoni kanye nababuka izinkanyezi.
Indawo yethu iphethwe i-Hostie - inkampani yamakhaya okuvakasha e-boutique eNyakatho ye-India. Umphathi wethu wendawo ye-Kumaon - u-Prem uzotholakala (ngocingo) ukuze axhumane nezivakashi ukuze uthole indawo yokuhlala enethezekile. Umnakekeli wethu u-Chandan uzobe esiza izivakashi ngesikhathi sokuhlala kwazo.
Umphathi wethu wendawo, angase avakashele le ndawo ngezikhathi ezithile ukuze akuhlole ukuthi wenza kahle yini, noma uma kukhona inkinga obhekene nayo, futhi ahlole indawo ukuthi ayinawo yini umonakalo. Lokhu kubalulekile kithi, futhi siyabuqonda futhi siyabuhlonipha ubumfihlo bakho. Uzothatha isikhathi sokubonana nawe ngocingo ngaphambi kokuvakashela indawo, futhi siyakucela ukuthi umnikeze indawo yokuhlala ukuze enze umsebenzi wakhe. Kunoma isiphi isikhathi, uma udinga noma yiluphi usizo oluphuthumayo, izinombolo zethimba lethu elisabela ngokushesha kanye nezinombolo zothintana naye esibambisene naye zizoshiwo endaweni emithethweni yendlu, nakwezinye izindawo. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi 24 X 7 uma kuba nanoma yisiphi isimo esiphuthumayo, Sizobe sikhona ukuze sikusize!
Indawo yethu iphethwe i-Hostie - inkampani yamakhaya okuvakasha e-boutique eNyakatho ye-India. Umphathi wethu wendawo ye-Kumaon - u-Prem uzotholakala (ngocingo) ukuze axhumane nezi…